RealThadin - Page 69 of 111 - News and Media
ဘယ်လဂျီယမ်နိုင်ငံသား (၄၄-ဦး) ကိုရီးယား(၃-ဦး) တောင်အာဖရိက(၄-ဦး) ဒီကနေ့ လာရောက်ရဟန်းခံတာတဲ့ဗျာ
ဘယ်လဂျီယမ်နိုင်ငံသား (၄၄-ဦး) ကိုရီးယား(၃-ဦး) တောင်အာဖရိက(၄-ဦး) ဒီကနေ့ ဖားအောက်ရိပ်သာမှာ လာရောက်ရဟန်းခံကြပြီ ကိုရီးယားသူ(၅-ဦး)က (ရက်-၉၀) တိတိ တရားအားထုတ်ဖို့ သီလရှင်ဝတ်ကြပါတယ်။ အနောက်ကမ္ဘာမှာတော့ ဘုရားရှင်ရဲ့ အဆုံးအမတွေကို ပညာတတ်အသိုင်းအဝိုင်းတွေက ရာနှုန်းပြည့်နီးပါး ယုံကြည်ကြပြီး အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ အလုံးအရင်းနဲ့ ဘာသာပြောင်းတွေများလာခဲ့ပါတယ်။ အဓိက, ကတော့ မြန်မာပြည်ကိုလာပြီး လက်တွေ့ […]
ဖုန်းနံပါတ် အပြဲလေးကိုင်ပြီး အမေဆီ ဖုန်းဆက်ချင်လို့ပါဆိုတဲ့ ကိုရင်လေး . . .
ဖုန်းနံပါတ်အပြဲလေးကိုင်ပြီး အမေဆီ ဖုန်းဆက်ချင်လို့ပါဆိုတဲ့ ကိုရင်လေး ” ဦးဇင်း ဖုန်းဆက်လို့ရလား ” ” ဟေ ရတာပေါ့ဘုရား ကိုရင်က ဘယ်သူဆီများဆက်မလို့လဲ” အေမ့ဆီကိုပါ ” ” ဖုန်းနံပါတ်ကော ပါရဲ့လား ” ” ပါပါတယ်ဘုရား ”လက်ထဲကြည့်လိုက်တော့ နှစ်ပိုင်းပြတ်နေတဲ့ကတ္ထူစာရွက်လေး။” ဟာ ကိုရင် […]
ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းတစ်ခြမ်းတွေဖြစ်တဲ့ ခေတ် နဲ့ သစ်တို့ အမြွှာညီအစ်မ နှစ်ယောက်ကတော့ သူတို့ရဲ့ချစ်စဖွယ် အမူကျင့်လေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကိုအချစ်ပိုအောင် လုပ်လိုက်ပြန်ပါပြီနော် ။ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်တဲ့အမေစုရဲ့ (၇၅) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရအနေနဲ့ ခေတ်နဲ့သစ်တို့ရဲ့ ဖိုးဖိုးဇော်က အမေစု ပုံတူပန်းချီလေးကိုရေးဆွဲခဲ့ပါတယ် ။ ထရီဇာက တော့ “အမေစု […]
အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အဘိဝံသဘွဲ့ကြီး ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တဲ့ သာသနာ့အာဇာနည် ပေါ်ထွန်းလာပြီ
အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အဘိဝံသဘွဲ့ကြီး ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သော စစ်ကိုင်း မြစကြာကျောင်းတိုက်က သာသနာ့အာဇာနည်အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အဘိဝံသဘွဲ့ကြီး ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သော စစ်ကိုင်း မြစကြာကျောင်းတိုက်က သာသနာ့အာဇာနည်အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အဘိဝံသဘွဲ့ကြီး ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သော စစ်ကိုင်း မြစကြာကျောင်းတိုက်က သာသနာ့အာဇာနည်လေးပါဗျာ…. သတ်မှတ်ချက်နှင့်ပြည့်စုံရမည့်အချက်များ အဆိုပါစိစစ်ရေးအဖွဲ့မှ အသိအမှတ် ပြုနိုင်ရန် ထိုကျောင်း၌ သီတင်းသုံးနေထိုင်မည့် ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးသည်လည်းကောင်း၊ ဒါယကာတို့ လှူဒါန်းသောမြေပေါ်ရှိ […]
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မည်သူမျှလိုက်လို့ မမီနိုင် တဲ့ အရည်အချင်း ( ၁၀ ) ခုအကြောင်း
ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် ရဲ့ မည်သူ မျှ လိုက် လို့ မမီနို င် တဲ့ အရည်အချင်း ( ၁၀ ) ခု အကြောင်း ၁။ ဘာ သာ စကား မြန်မာ လူဦးရေ ( ၅၂ ) […]
အိမ်ထောင်စု ၅သန်း ၄သိန်းကျော်ကို တစ်စုလျှင် ၂သောင်းနှုန်းဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် ထောက်ပံ့မည် . . .
အိမ်ထောင်စု ၅သန်း ၄သိန်းကျော်ကို နှစ်ပတ်အတွင်း တစ်စုလျှင် ၂သောင်းနှုန်းဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် ထောက်ပံ့မည် ကိုဗစ်ကာလ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အခြေခံလူတန်းစားများ စားဝတ်နေရေးအတွက် အစိုးရက အိမ်ထောင်စု ၅သန်း ၄သိန်းကျော်ကို နှစ်ပတ်အတွင်း အစိုးရ ခွင့်ပြုချက်ရယူကာ တစ်အိမ်ထောင်စုလျှင် ငွေကျပ် ၂သောင်းနှုန်းထောက် ပံ့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတရုံး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် […]
အွန်လိုင်းမှာ လူကြည့်အများဆုံး မသန်စွမ်းတီးဆိုအဖွဲ့ရဲ့အင်းလေးမှာ ရွာတဲ့မိုး ဆိုသွားတာ (ရုပ်သံ)
အွန်လိုင်းမှာလူကြည့်အများဆုံး မသန်စွမ်းတီးဆိုအဖွဲ့ရဲ့အင်းလေးမှာ ရွာတဲ့မိုး ဆိုသွားတာ ပထမသီချင်းလေးကတော့ ဈေးထဲမှာ မျက်လုံးထဲကလား အုန်းနှောက်ထဲကလားသီချင်းလေးဖြစ်ပီး အွန်လိုင်းမှာကြည့်ရှူ့သူတွေ အရမ်းများခဲ့ပါတယ်။ အဆိုရောတီးရော အရမ်းကောင်းပါတယ်။ သူတို့ခများများမှာတော့ မျက်စိမမြင်ရတဲ့ မသန်ပေမယ့် စွမ်းတဲ့ မသန်စွမ်းလေးတေပါ။ ဘယ်လိုချို့တဲ့မှုတွေဖြစ်နေပေမယ့် ဘဝကို လက်မြှောက်အရှုံးမပေးပဲ ရပ်တည်ကြိုးစားနေကြတာပါ။ တစ်ကယ်တော့ လူ့ဘဝဆိုတာ ဘယ်လိုလူမှ ပီးပြည့်စုံတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ […]
မန္တလေးမှာ ကဖေးနှင့် စားဖွယ်စုံဆိုင်ကြီး ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီး ပရိသတ်တွေကို လာရောက်အားပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့ ခင်လှိုင် အငြိမ့်ဇာတ်သဘင်တွေမှာ ခင်လှိုင်ကတော့ ဟာသလူရွှင်တော်တစ်ယောက်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံတစ်ယောက်အဖြစ် အောင်မြင်လာခဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ခင်လှိုင်က သူကိုယ်တိုင် ဒါရိုက်တာလုပ်ပြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကိုလည်းရိုက်ကူးနေလျက်ရှိပြီး ပရိသတ်အားပေးမှုကို အထိုက်အလျောက်ရရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်လှိုင်ကတော့ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် […]
အစားမစားရလို့ အားအင်ကုန်ခမ်းလဲကျခါနီးပေမယ့် သားငယ်ကို ပွေ့ထားတဲ့ ဖခင် . . .
အဖေသာ မူးလဲပီးအသေခံ​မယ် ငါ့သားသမီးမြေကြီးပေါ် မကျစေရဘူး ဒီပုံလေးကိုကြည့်ပီးမိဘတိုင်းဟာ သားသမီးအပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာတွေစေတနာတွေကို နားလည်နိုင်ကြပါစေ။လောကမှာ မိခင်မေတ္တာတင်ကြီးမှားလှတာမဟုက်ပါဘူဗျာ။ဖခင် မေတ္တာဆိုတာလည်း တုနိုင်းမဲ့မေတ္တာရှင် ဂန္တဝင်ဖေဖေပါ။ Unicode အဖသော မူးလဲပီးအသခေံ​မယျ ငါ့သားသမီးမွကွေီးပျေါ မကစြရေဘူး ဒီပုံလေးကိုကွညျ့ပီးမိဘတိုငျးဟာ သားသမီးအပျေါထားတဲ့မတ်ေတာတှစေတေနာတှကေို နားလညျနိုငျကွပါစေ။လောကမှာ မိခငျမတ်ေတာတငျကွီးမှားလှတာမဟုကျပါဘူဗြာ။ဖခငျ မတ်ေတာဆိုတာလညျး တုနိုငျးမဲ့မတ်ေတာရှငျ ဂန်တဝငျဖဖေပေါ။
မကွေးမြို့ ရွှေလမင်းထမင်းဆိုင်မှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဇွန် ၁၈ ရက်နေ့မှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၇ ဦးကို အရေးယူသွားမယ်လို့ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးက ပြောပါတယ်။ ရွှေလမင်းထမင်းဆိုင်နားမှာ သမီးယောက်ဖချင်း ဓားတွေ၊ တုတ်တွေကိုင် ခိုက်ရန်ဖြစ်ကြစဉ် ဓားကိုင်သူအား လှည့်ကင်းလှည့်နေတဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ဖမ်းဆီးဖို့ ကြိုးစားရင်း […]